होसियार ! असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्दै हुनुहुन्छ, यस्ता रोग लाग्लान - Saptakoshionline
होसियार ! असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्दै हुनुहुन्छ, यस्ता रोग लाग्लान
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १५, २०७५ समय: १५:०७:३२
क्लामाइडिया एउटा सामान्य यौन संचारित रोग हो । जुन क्लामाइडिया ट्राइकोमोटिस जीवाणुका कारण उत्पन्न हुन्छ । यो रोग गुदा वा मुखमैथुनका कारण सर्न सक्छ । गोनोरियो यो भिसेरिया गानेरिया नामक जीवाणुबाट हुन्छ । जुन महिलाको प्रजनन मार्गको गरम र नमी भएको क्षेत्रमा सजिलै तीब्र गतिमा वृद्धि हुन्छ । यसका जीवाणु मुख, घाँटी, आँखा र गुद्दामा पनि हुर्कन सक्छ ।
यो यौन संचारित बिमारी हो । जुन हर्पिस सिम्प्लेक्स नामक भाइरस (टाइप वन र टाइप टु) बाट जन्मन्छ । सिफलिस यो ट्रेपोनमा पल्लिडम नामक जीवाणुबाट हुन्छ । यो बिमारीको लक्षण पीडित महिलामा कैयौ वर्षसम्म देखा नपर्न सक्छ । हेपाटाइटिस बीः हेपाटाइटिस बीको संक्रमण पनि असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण वीर्यका माध्यमबाट सर्न सक्छ । हेपाटाइटिस बीको सुरुवाती लक्षण थकान, पाचन शक्ति कमजोर हुनु, वाकवाकी लाग्नु आदि हुन् । जुन सामान्य लाग्छन् र यसको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो । एड्सः एड्स पनि असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण सर्ने रोग हो । यसको लक्षण ज्वारो आउने, थकान, कमजोरी, बारम्बार फंगल संक्रमण, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी आदि हुन् ।
कण्डोमको प्रयोग आवश्य गर्नुपर्छ । यो संक्रमण रोक्न धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुन्छ । हेपाटाइटिस बी को संक्रमणबाट बच्न समयमै खोप लगाउनुपर्छ । आफ्नो जीवनसाथीप्रति इमान्दार रहनाले कैयन बिमारीबाट बच्न सकिन्छ । कैयौ युवती विज्ञापनबाट प्रभावित भएर गर्भ्निरोधक औषधि खान्छन् । त्यस्ता गर्भ्निरोधक औषधि लिनुपूर्व चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ ।